Pakistana : Fandripahana ny Shiita – Hatrany Karashi ka hatrany Kohistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2012 16:32 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, Deutsch, Español, English
Tamin’ny 28 Febroary 2012, andian-dehilahy mitam-piadiana , nisandoka ny fitafian ‘ny miaramila Pakistaney, tany Kohistan Distrikan’I Khyber Pakhtunkhwa, no nanakana fiara lehibe mpitatitr’olona anankiroa sy kamionety nitandahatra an-dàlana hody avy nanao fivahiniana masina tany Gilgit Balistan ,toerana masina any Iran. Raha araka ny tatitry ny vavolombelona dia nambanana basy noterana hamoaka ny kara-panondrony ireo mpandeha.
Rehefa avy eo Ireo lehilahy sy vehivavy voafidy tamin’ izany dia nasaina nidina ny fiara fitaterana, nilahatra ary notifirina akaiky. Valo ambiny folo tamin’izy ireo ( vehivavy ny roa) no maty teo no ho eo ary maro hafa kosa naratra. Ny itovizan’ireo novonoina ho faty dia noho ny finoany. Izy ireo dia samy avy ao amin’ny sekta Shiita avy amin’ny finoana silamo.
Ny filaharan’ny zava-niseho
Tsy vao voalohany no nisy ny famonoana Shiita noho ny finoany toy izao tany Pakistana. Raha hiverenana ny tamin’ny taona 1990 dia dokotera sy injeniera maro tao anatin’io antokom-pinoana io no nokendrena hovonoina avy hatrany. Dokotera Shiita 87 no notaterina fa maty hatramin’ izany famonoana izany ka hatramin’izao.
Rehefa nandeha ny fotoana, nikisaka avy any atsimon’I Painjaby nankany Parachinar(KPK) sy Balochistan izay toerana mandray ny foko Shiita Hazara ho olona tena manan-kaja sy ambony ny ivon'ny famonoana mifototra amin’ny finoana .
12 fara- fahakeliny ny mpikambana amin’ny vondron’ny Shiita Hazara no maty voatifitra tany atsimon’ny tanànan’i Quetta. Image by RFE/RL. Copyright Demotix (4th October 2011)
Ireto manaraka ireto ny fizotry ny raharaha mahatsiravina herintaona lasa izay maneho an-tsary ny rà nandriaka :
6 Avrily 2011- 5 no maty tany Hazar Gunji, Baloshistana
6 May 2011- olona maro no maty tany Hazara graveyard vokatry ny fifampitifirana tampoka (Western Bypass Quetta)
18 May 2011- olona 6 maty tamin’ny fanafihana fiarakodia izay nitranga tany Hzar Gunji ihany
29 Jolay 2011- mpanao fivahiniana masina maro no maty noho ny fanafihan’ny andian-dehilahy mitam-piadiana fiara mpitatitr’olona tany Sohrab Goth, Quetta
30 Aogositra 2011- 11 no maty noho ny fipoahana mahery vaika teo ivelan’ny Moske Quetta rehefa vita ny vavaka Eid ul Fitr
20 Septambra 2011- tany Mastung, 30 tamin’ireo mpivahiny masina no maty noho ny fanafihana (mitovy amin’ilay iray tany Kohistan) nitranga tamina fiara fitateran’olona ho any Iran
O4 Oktobra 2011- tany Baluchistan, olona 13 no maty vokatry ny fanafihana fiara mpitatitr’olona tany akakaikin’ny faritra andrefana ny bypass.
31 Desambra 2011- tany Karachi, ny mpitolona mamim-bahoaka Askari Daza dia nisy namono niaraka tamin’ ny zanakalahin’ ny iraitam-po aminy.
17 Janoary 2012- tany Kanpora atsimon’I Punjab, fanapoahana baomba tamina filaharana masina (chehlum)nahafatesana mpizaika , izay nifona mba hahazo famonjena, 18.
25-30 Janoary 2012- tany Karashi, valo isa ireo herisetra avy amin’ny sekta nitranga tampoka sy ny fanafihana nataon’ ireo mpitolona, niseho tany amin’ny renivohitra ekonomika pakistaney, ka namoizana ain’ olona 11 izay efa nokendrena hovonoina.
18 Febroary 2012-tany Parashinara, olona 41 no maty vokatry ny fanaovana vy very ny aina taorian’ny fivavahana ny andro zoma
19 Febroary 2012- Muzaffar Garh, manam-pahaizana mpikaroka Shiita ary talen’ny sekoly Hafiz Saqlain Naqvi , no nisy nanafika tao anatin’ny fifampitifirana, ary maty noho ny ratra nahazo azy tamin'izany taty aoriana.
Ny filaharam-be tamin’ny fandevenana ny mpitarika Shiita novonoina, Askari Raza. Kazmi. Copyright Demotix (1st January 2012)
Ny mpitoraka blaogy Suleman Akhtar tao amin’ny lahateniny dia nahita ny itovian’izao famonoana izao amin’ny tantara mampivarahontsana momba ny fisoronana (fandringanana Jiosy) :
Tamin’ny fotoana farany nitrangany dia nantsoin’izy ireo hoe Fisoronana . Ireo Nazi dia tsy nandripaka ny Jiosy noho izay zavatra nataony na koa noho ny anton’ny zavatra tsy vitany. Naringany fotsiny ireo jiosy aman-tapitrisany maro na lahy na vavy na ankizy noho ny maha Jiosy azy .
Fanovana ny tanjona politika
Nandritra izay folo taona lasa izay , Pakistan dia ivon’ny fitolomana ara-pinoana sy ny fihenjanam-pihetsika. Ireo sekta manana fomba fitafy voarara toy ny Sipah e Sahaba sy lashkare e Jhangvi izay navela hiroborobo taloha dia nanjary nivadika nanohitra ny mpitarika azy ka izany no mahatonga ny hetaheta hanao vy very ny aina manerana an ‘i Pakistana.
Ireo mpino sy ny antoko farany havanana dia niantso ity fanaovana vy very ny aina ity ho valin’ny fanafihan’ny drone ( fiara-manidina voabaiko lavitra azo ampiasaina amin’ny raharaha maro, indrindra entina hitsikilovana ny fahavalo amin’ny ady ). Saingy ny zava-niseho taorian’ny raharaha Oussama Bin Laden dia nanova ny tohin’ity andiana fampihorohoroana vaovao ity. Ahitana ohatra amin’izany fiovàna izany eo amin’ny fifandraisana vaovao ho an’ny fampandrosoana itambaran’ny antokom-pinoana 41 fehezin’ny foto-kevitra vavaon’ny fikan-kevitry ny mpiaro an’I Pakistan (DPC), tarihin’ny sefon’ny ISI taloha sy ny mpanohana Talibana Hammed gul, jeneraly antoko ankavanana Zia sy ny minisitra taloha Ijaz Ul Haq, mpanao politika ankafizin’ny haino aman-jery Pakistaney Sheikh Rasheed, ary ny mpitarika ara-pinoana Sami ul Haq izay fantatra amin’ny fiarahany akaiky amin’ny Talibana Afgana ary nanenjika ny fomba fiakanjon’ny sekta toy ny Sipah e Sahaba, Laskgar e Jhangvi ary ny Jamat u Dawa.
Tena mahagaga hoe ahoana no nampiova ny fomba fijerin’ireo antoko voalaza etsy ambony sy ireo olona ao amin’ny DPC momba ny tafika Pakistaney na ny fiandrianam-pirenena vetivety eo. Manao fampivondronana manerana an’ I Pakistan izy ireo ho fanohanana ny tafika raha ny fahitàna azy. Ny vola laniny amin’izany fampielezan-kevitra izany dia aman-tapitrisany maro. Inona ny tombontsoa sy fahafahana azon’ izy ireo ao ambadik’izany, mijanona ho fanontaniana mampiahiahy ihany.
Filaharam-panoherana nataon’ny silamo Shiita tany Karachi, anoherana ireo shiita nofantenana hovonoina any Pakistan.. Sary Majid Hussein, copyright Demotix (20/06/2010).
Ny tsy fahombiazan’ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara
Ny fitohizan’ny fisian’ny famonoana ara-pinoana dia mahalaza betsaka ny fahaizan’ny mpampiasa ny fanamafisan-dalàna eo amin’ny firenena sy ny andrim-panjakana. Ireo mpampihorohoro ireo rehefa tratra dia afaka mora foana na iza izy na iza noho ny lesoka misy eo amin’ny fomba fitsarana.
Manazava io seho io ao amin’ ny lahateniny I Murtaza Haider:
Nandritra ny taona 1990 sy 2009 , raha ny fitsaràna miady amin’ny fampihorohoroana (ATC) tany Punjaby fotsiny dia nahitàna tsy fahafahana nanameloka ny 74 isan-jaton’ny voampanga tamin’ny tranga 311 izay namoahana didim-pitsaràna farany. Ny ankamaroan ‘ireo voampanga dia afaka madiodio tsy noho ny fahaizany nanazava sy/na nanindry ny maha tsy meloka azy, fa noho ny fitsaràna any Pakistan tsy manana fahafenoana hitsara momba ny raharaha fampihorohoroana izay miankina amin’ny porofo hita maso sy ny porofon’ny mpikaroka ara-dalàna ny fanamelohana fa tsy miankina amin’ny fijoroana vavolombelona…. Amin’ny 36 isan-jaton’ny tranga ,dia afahan’ny fitsaràna madiodio ny voaheloka satria tsy voatonona manokana ao amin’ny FIR ny anarany . Fepetra tsy mitombona mihitsy amin’ny asa fampihorohoroana.
Tsy nisy fepetra ho fanatsaràna noraisin’ireo solombavambahoaka akory mba hanaraha-maso ny fitomboan’izany finoana mifototra amin’ny fampihorohoroana izany. Na izy ireo matahotra ny faharesen’ny antokon’ny mpino na mbola sahirana any an-kafa any izay tsy mahagaga ny mpifidy azy intsony .
Torak’izany, ny lehiben’ny mpitsara ao pakistan, izay vonona hitondra fiovàna amin’ny fandraisana ny valin’ny fizahana nataon’i Suo Moto (misahana ny olana tsy dia manan-danja loatra toy ny fanakaratoham-baravarana sy ny momba ilay vehivavy mpilalao sarimihetsika tratra tampoka nitondra tavoahangy misy toaka tany amin’ ny seranam-piaramanidina ) , dia tsy mahalala na inona na inona momba ny famonoana shiita sy ireo foko vitsy an’isa hafa. Tsy nisy fepetra noraisina na dia avy amin’ireo nantsoina hoe fahefan’ny fitsaràna, izay nihetsiketsika hanavao ny fandaharan’ asa any amin’ny fitsarana momba ny fampihorohoroana. Antony iray dia mety tsy malaza noho ny vavahadin’ny fahatsiarovana (memo gate) ny famonoana ny vondrona vitsy an’isa eo amin’ny haino aman-jery .
Fahanginana mahatofoky ny haino aman-jery mahazatra sy ny fiaraha-monina
Ny dokotera mpikaroka Muhammad Taqi dia nanoratra momba ny fihetsiky ny haino aman-jery manoloana ny famonoana ny shiita sy ireo foko vitsy an’isa hafa:
Ao anatin’ny minitra vitsy hisehoan’ny fotoana feno aizina dia ny haino aman-jery tranainy sy vao haingana no mitantara ny antsipirihan’ ireny zava-mitranga ireny- toa tsy dia manaitra noho ny tsindrona amin’ny hoditry ny tantara. Saingy rehefa tonga ny resaka fandringanana ny vitsy an’isa any Pakistan, dia lasa misy fahatàrana eo amin’ny fanapariaham-baovao amin’ny antsipirihany eny fa na ny famintinana aza…
Zara fa misy famakafakàna na ady hevitra indray mandeha no mba mifantoka amin’ny hamaroan’izany fihetsika mampivaraontsana izany.
Mahatonga hametra-panontaniana hoe maninona ny famonoana mahatsiravina toy izany no tonga fotoana Leontius ho an’ny haino aman-jery. Maharikoriko azy ve ny mijery ireo razana novonoina vao haingana sa kosa zavatra hafa?
Nandritra ny taona vitsy lasa izay ny haino aman-jery sosialy Pakistane dia nisongadina ho mpanelanelana entina hanova ny hevi-bahoaka sy handodona ireo tompon’andraikitra ara-dalàna handray fepetra momban’ ny tombotsoam-bahoaka.
Ny ohatra farany izao dia ny fampielezan-kevitr’i Maya Khan . fa mba firy ny fampielezan-kevitra natao hanazavàna ity olana izay tena efa mihatra ity? Tsy nisy na ny iray aza.
Ny ohatra farany izao dia ny fampielezan-kevitr’i Maya Khan. Fa mba firy ny fanentanana natao hanazavàna ity olana izay tena efa mihatra aman'aina ity? Tsy nisy na ny iray aza.
Manazava i Suleman Akhtar:
Fa satria ny fanjakana efa resy tanteraka amin’ny fiarovana ny ain’ny vahoakany, dia ireo manam-pahalalàna sy mpanao gazety- misy vitsivitsy maningana- milaza ny tahan'ny herisetra be loatra mihatra amin'ny Shiita,izay nanjary teo-javatra mahazatra. Ny fahanginana makarenin-tsofina sy ny tsy filazàna ny marina momba ity famonoana feno habibiana ity dia manampy ny fahantran’ny foko Shiita… ny mombamomba ireo niharam-boina matetika dia iniana adinoina mba hanasàrotana ny fahazoan’ny firaisam-pon'ny mpijery sy mpamaky ny zava-misy izay mihaloza isan’andro .
Silamo Shiita Pakistaney miantsoantso ny teny filamatra nandritra ny fanoherana ny famonoana ikendrena ny silamo shiita. Image by Syed Yasir Kazmi. Copyright Demotix (23 September 2011)
Ny faharariana anaty noho ny misterin’ireo tsy hita sy ny famonoana ho faty dia efa navoitran’ireo mponin’I Baluchistan tamin’ny fitsaràna maro samihafa. Ny tsy fanekena ny fahasamihafana sy ny tsy fahampian’ny fepetra fanatsaràna dia nanova izany fery izany ho aretina homamiadana. Dia faly hijery ny fihombon’ ny fototr’izany aretina izany ve isika ary hinia tsy hahalala ny vokany izay tsy azo hiodivirana? Ny fotoana no hamaly azy. Hatreto ,dia avelako amin’ireto teny famaranana ireto ianareo:
Miankina amin’ireo vitsy an’isa Pakistaney ihany- ny Shiita, Ahmediyya, kristiana, Indo , Sikhy- raha toa ka tia hanohy hanontany an’ireo mpaniraka ankolaka hanao ny fandringanana noho ny tsy fitoviana izy ho mpanelanelana hiteny amin’ny anarany na hampiakatra ny olana amin’ny fitsarana iraisam-pirenena araka izay azo atao. Ireo Baloch no nandray ny fitarihana amin’izany satria izy ireo no mahalala fa ny mpanatanteraka ny famonoana sy ireo lehibeny dia efa za-draharaha ary tsy hijanona amin’ny sitrapony (Dr Muhammad Taqi)
Ny olana eo an-tànana dia tsy ny hoe iza ireo mpamono olona mandripaka manerana ny firenena, Fa ny fanontaniana voalohany tokony heritreretina sy hosaintsainin’ ny hevitra iombonana amin’ny mbola maha firenena dia ny hoe iza ireo olona misy mamono ireo. Rehefa voapetraka sy voavotra tsara io fanontaniana io ,izay nalevina tao ambany karazan-dainga sy fitaka hatramin’izay,ny marina nafenina tao ambadiky ny zavona dia hanangasanga hivoaka. rehefa mazava amintsika hoe naninona ireo foko nampijaliana sy novonoina marobe nandritra ny ady lehibe faharoa no tadidy ho ny Jiosy fa tsy ny alemana, ny poloney na holandey na dia efa niaina tany amin’ireo firenena rehetra ireo aza, hanomboka haminavina ny zava-misy marina isika. (Suleman Akhtar)